Izikhukhula ezinkulu eYurophu zizoba njalo kakhulu ngasekupheleni kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Thaw yinkinga ezogcina isithinte sonke, ikakhulukazi labo abahlala eziqhingini eziphansi noma ogwini. Endabeni ethile yaseYurophu, kunabantu abangaba yizigidi ezinhlanu okuzothi ekupheleni kwekhulu leminyaka babe sengozini enkulu yokuhlushwa imiphumela yezikhukhula ezinkulu, ngokocwaningo olushicilelwe encwadini ethi »Ikusasa Lomhlaba».
Lezi zinhlobo zezinhlekelele, ezenzeka kanye njalo eminyakeni eyikhulu, kungenzeka minyaka yonke uma beqhubeka nokukhipha amagesi abamba ukushisa njengoba senza manje.
Ucwaningo, olulungiselelwe yithimba labaphenyi bamazwe aphesheya abavela eGrisi, e-Italy naseNetherlands, futhi ebeliholwa yiJoint Research Center ye-European Commission, lembula ukuthi ukwandisa imvamisa yezikhukhula ezingase zilimaze kungenzeka kududule izakhiwo zamanje zokuzivikela ngaphezu kwemikhawulo yazo, izindawo eziningi ezisogwini zazizodalulwa.
Izifunda zaseNyakatho Yurophu, iMedithera kanye noLwandle Olumnyama zizothola ukwanda okukhulu kwezikhukhula ezinkulu, kuze kube seqophelweni lokuthi, uma kuze kube manje zenzeka kanye njalo ngekhulu leminyaka, ngo-2100 zazingavela kaningana ngonyaka.
Izikhukhula zizoba yinkinga ekhula njalo.
UMarta Marcos, umcwaningi eMedithera Institute for Advanced Studies yaseSpain, waveza ukuthi isibalo sabantu abahlala ezindaweni ezinobungozi bezikhukhula singasetshenziswa ukuthola ubukhulu bomthelela le nkinga enayo emphakathini nasemnothweni, ezingasiza ekwakheni amasu angcono okuzivumelanisa nezimo.
Futhi ukuthi, esimweni esibi kakhulu, uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuqhubeka nokwanda, ulwandle ogwini lwaseYurophu luzokhuphuka ngesilinganiso samasentimitha angama-81, kuthinta abantu baseYurophu abangaba yizigidi ezinhlanu. Ukukhumbula lokhu, kubalulekile, futhi kuyaphuthuma, ukuthatha izinyathelo zokugwema inhlekelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Izikhukhula ezinkulu eYurophu zizobe zivame kakhulu ngasekupheleni kwekhulu leminyaka